Iko Kukosha kweZviitiko zveVashanyi | Martech Zone
Svondo, October 24, 2010 Muvhuro, Zvita 15, 2014 Douglas Karr
Tinoyera zvakawanda ne analytics, asi isu hatiwanzo kuisa kukosha pane chimwe nechimwe chezviito zvinoitwa nemushanyi pavanosangana nesu pamhepo. Izvo zvakakosha kuti makambani ateerere kune zvinopfuura kushanya uye shanduko… pane toni yekudyidzana pakati nepashure iyo inopa kukosha.
Muchati iri pamusoro ndine maekisesi maviri… kukanganisa uye kukosha. Sevashanyi se, retweet, feni uye tevera iwe kana bhizinesi rako… pane zvinokanganisa, kwete nekuda kwekuti mushanyi anogona kunge ari padhuze nekutenga, asi nekuti ivo vakawedzera chinangwa chavo uye kubvumirana kwavo kunetiweki. Ivo hazviiti kunyange kutenga, asi kana vaine simba rakawanda, simba ravo rinogona kumanikidza vamwe vazhinji kuti vatenge.
Zvimwe zviito zvinotorwa nevashanyi vako zvakakoshawo… kunyorera tsamba kuemail kana RSS, webinar, kudaidza dhipatimendi rako rekutengesa… izvi zvese zviito zvinofambisa tarisiro padyo nekuve mutengi. Mabhizinesi ane otomatiki zvirongwa zvinotaurazve kune vatengi vanozvisiya vachitenga ngoro vanonzwisisa kukosha kwechikamu ichocho. Sezvo ivo vaive padhuze nekutenga, vangangoda pini diki kana chiyeuchidzo… kana kunyange nguva yekuchengetedza mari inodiwa kutenga.
Mushure mekutenga chaiko kana kuvandudzwa, kune zvimwe zviito zvinowedzera kukanganisa kwekutengesa - ratings uye zvibvumirano zvezvigadzirwa zvakatengwa. Kuyera kune simba rakasimba pakuona kana kwete tarisiro inoita kutenga. Kubvumidzwa pachako kana kuongorora kwechigadzirwa kunorema zvakanyanya.
Sezvo iwe uchironga yako yepamhepo kushambadzira zano, ita shuwa yekutarisa yega yega chiito icho mushanyi anogona kutora. Govera kudyidzana uye kumisikidza kumishandirapamwe kuti uvafambise kubva kune chimwe chiito kuenda kune chimwe zvinobudirira. Izvo zvese kune kazhinji kuti tarisiro inosiya yako saiti uye iwe unorasikirwa nekutengesa nekuti zvaive zvisiri pachena mafambiro avakaita kubva kune chimwe chiito kuenda kune chinotevera pane yako saiti. Ipa nzira yakajeka yevashanyi vako kuti vaite newe. Ipa nzira dzakawanda dzezvakanaka zviripo.
Tags: ukoshimushanyi chiitikohunhu hwevashanyimushanyi kukosha
Hapana Rumbidzo Iri Nani Kupfuura Iyi!